Amathikithi Ebhanoyi Lencwadi - World Tourism Portal Izindiza
World Tourism Portal Izindiza
Sesha bese uqhathanisa izintengo zamathikithi endiza kusuka cishe kuzo zonke izindiza bese ukhetha okungcono kakhulu kuwe.
Izame. Kumahhala futhi kuphephile!
Imihlahlandlela ejwayelekile yamathikithi wokubhuka
Le mihlahlandlela izokusiza ugweme amaphutha futhi ikonge isikhathi nemali.
1 / Sicela uqinisekise ukuthi ukhetha ithikithi elifanele lapho uya khona. Amanye amaphutha ajwayelekile ukukhohlwa amathikithi okubuya okubhukwayo, ukukhohlwa amathikithi abantu abaningi nokubhuka ithikithi ngezinsuku ezingalungile.
2 / Njalo funa i-imeyili yokuqinisekisa ngethikithi lakho bese uyifunda ngokucophelela. Uma kwenzeka iphutha, kufanele uthinte inkampani yezindiza ngokushesha bese wenza amalungiselelo (ngemuva kwamahora angama-24 ezinye izindiza zinganikeli imbuyiselo).
3 / Sicela uqinisekise ukuthi uyaqonda ukuthi iyiphi inketho onayo yokungena. Kungenziwa ku-inthanethi izinsuku ezimbalwa ngaphambili noma esikhumulweni sezindiza.
4 / Sicela uqinisekise ukuthi imininingwane yakho ilungile (igama lakho elithendeni kufanele lifane ncamashi nelalibhalwe ku-ID yakho noma iphasiphothi).
5 / Sicela uqinisekise ukuthi ukhethe izinketho ezifanele uma uthwele umthwalo.
6 / Sicela uqinisekise ukuthi unesikhathi esanele lapho uguqula izindiza esikhumulweni sezindiza ukuze ungaphuthelwa indiza yakho yokuxhuma.
7 / Ngeminye imininingwane, sicela ufunde amathiphu ethu wokuvakasha ajwayelekile. Amathiphu Asetshenziswayo Wohambo
World Tourism Portal angeke neze sibe nesibopho sokwehluleka ukwenza noma yiziphi izinto ezisetshenziselwe amalungelo nezintshisekelo lapha. Kungumsebenzi wakho kuphela ukuthi uqiniseke ukuthi ubhukhe amathikithi afanele ngohambo lwakho futhi asikwazi ngandlela thile ukusizwa sikweletelele amaphutha okungenzeka kube khona, ukukhanselwa, ukubambezeleka, ukubuyiselwa kwemali, izindleko kanye / noma ushintsho lwamathikithi.
Amathikithi Ebhanoyi Lencwadi - World Tourism Portal Izindiza. Sesha amakhulukhulu ezindawo zokuhamba ngasikhathi sinye ukutholela wena amathikithi endiza ashibhile kakhulu. Sesha amathikithi endiza avela kubo bonke abahlinzeki abakhulu, bonke endaweni eyodwa.
Uhlobo lwenkonzo: Amathikithi Ebhanoyi